Koox Burcad ah oo dil ka geystay Muqdisho - Awdinle Online
Kooxo hubeysan ayaa xalay xaafad ka tirsan degmada Dharkeenley ee Gobolka Banaadir waxaa ay ku dileen wiil dhalinyaro ah oo la sheegay inuu kamid ahaa dadka deegaanka degmadaas.
Dilkaas ayaa waxaa uu sigaar ah uga dhex dhacay Guriga Marxuumka oo ku yaalla Xaafada Macalin Nuur ee Dharkeenley, kadib markii ragga hubeysan guriga uga dhex-galeen, kadibna ay toogteen.
Warar la helayo ayaa sheegaya in dilka wiilka dhalinyarada ah loo geystay uu yimid, kadib markii ragga hubeysan ay weydiisteen Mobile uu watay, uuna siiyay, hayeeshee markii uu galay gurigiisa ay dileen.
Ragii ka dambeeyay falkaas ayaa goobta si deg deg ah uga baxsaday, mana jiro Ciidamo ka tirsan dowladda oo la sheegay in halkaas ay tageen, waxaana falkaas siweyn uga naxay dadkii xaaladda la deganaa Marxuumka oo lagu magacaabi jiray C/raxmaan Ciise Yalaxoow.
Previous articleRa’iisul Wasaaraha Magacaaban oo kulamo ka wada Muqdisho
Next articleAl-Shabaab oo weerar ka geystay Gudaha Kenya